တိုရာကျမ်းဆိုတာ ဘာလဲ။ ပင်တကျွတ်ဆိုတာ ဘာလဲ
ဖတ်လို ကင်ယာဝန်ဒါ ကာရ်ဂီ ကိုရီးယား ကီရွန်ဒီ ကီလူဘာ ကွမ်ယာမာ ခရိုအေးရှား ချက် ချီချေဝါ ချီတမ်ဘူကာ ချီတွန်ဂါ ဂရိ ဂျပန် ဂျာမန် ဂျော်ဂျီယာ စင်ဟာလာ စပိန် စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား စီပီဒိုင် စီဘွာနို ဆက်ဆွာနာ ဆားဗီးယား (စီရီးလစ်) ဆားဗီးယား (ရိုမန်) ဆွာဟီလီ ဆွီဒင် ဇူးလူး တဂါးလော့ တမီလ် တယ်လ်ဂူ တရုတ် ကန်တုံ (ခေတ်သုံး) တရုတ် ကန်တုံ (ရှေးသုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တာတာ တိဗ် တီဂရင်ယာ တူရကီ ထိုင်း ဒတ်ချ် ဒိန်းမတ် နော်ဝေ ပါပီယာမန်တို (ကုရာစောင်း) ပါပီယာမန်တို (အရူးဘာ) ပိုလန် ပေါ်တူဂီ (ပေါ်တူဂယ်လ်) ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး) ပြင်သစ် ဖင်လန် ဖီဂျီ ဗန်ဒါ ဗီယက်နမ် ဘူလ်ဂေးရီးယား မက်ဆီဒိုးနီးယား မလေး မာလဂက်စီ မာလာယာလမ် မော်လ်တီစ် မြန်မာ ယူကရိန်း ယောရာဘာ ရိုမေးနီးယား ရုရှား ရှိုစာ ရှိုနာ လင်ဂါလာ လစ်သူယေးနီးယား ဟင်ဒီ ဟန်ဂေရီ ဟီဘရူး ဟီလီဂေနွန် ဟေတီ ခရီအိုးလ် ဟောက်ဆာ အက်စတိုးနီးယား အင်ဇီမာ အင်ဒိုနီးရှား အင်္ဂလိပ် အစ်ဘို အဇာဘိုင်ဂျန် အဇာဘိုင်ဂျန် (ဆီးရီးလစ်) အမ်ဟာရစ် အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဖရိက အာမေးနီးယား အာရဗီ အိုက်စလန် အီတလီ အီလိုကို ဥဇဘက် ဥဇဘက် (ရိုမန်)
အင်္ဂလိပ်စကားလုံး “တိုရာ” (Torah) ဟာ “ညွှန်ကြားချက်၊” “သွန်သင်ချက်၊” “ဥပဒေ” လို့ ဘာသာပြန်ဆိုတဲ့ ဟီဘရူးစကားလုံး toh·rahʹ ကနေ ဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်။ * (သုတ္တံ ၁:၈။ ၃:၁။ ၂၈:၄) အောက်ပါနမူနာတွေက ဒီဟီဘရူးစကားလုံးကို ကျမ်းစာမှာ ဘယ်လိုသုံးထားကြောင်း ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။
တိုရာဆိုတာ အများအားဖြင့် ကမ္ဘာဦး၊ ထွက်မြောက်ရာ၊ ဝတ်ပြုရာ၊ တောလည်ရာ၊ တရားဟောရာ ဖြစ်တဲ့ ကျမ်းစာရဲ့ ပထမကျမ်းငါးကျမ်းကို ဆိုလိုတယ်။ အဲဒါကို ဂရိလို ပင်တကျွတ်လို့လည်းခေါ်ပြီး အဓိပ္ပာယ်က “ငါးအုပ်တွဲ” ဖြစ်တယ်။ တိုရာကျမ်းကို မောရှေရေးသားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် ‘မောရှေရဲ့ပညတ်ကျမ်း’ လို့လည်း ခေါ်တယ်။ (ယောရှု ၈:​၃၁။ နေဟမိ ၈:၁) အစတုန်းက တစ်အုပ်တည်းဖြစ်ပေမဲ့ အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်အောင် နောက်ပိုင်း အပိုင်းခွဲလိုက်တယ်။
“အပြစ်ဖြေရာ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းတရား၊” “နူနာတရား” နဲ့ “နာဇရိလူစောင့်ရသောတရား” စတဲ့ အစ္စရေးတွေကိုပေးတဲ့ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ပညတ်တွေကိုလည်း တိုရာလို့ခေါ်တယ်။​—ဝတ်ပြုရာ ၆:​၂၅။ ၁၄:၅၇။ တောလည်ရာ ၆:​၁၃။
တစ်ခါတလေ တိုရာဟာ မိဘတွေ၊ ပညာရှိတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ပေးတဲ့ သွန်သင်ချက်၊ နည်းဥပဒေသနဲ့ တရားကို ဆိုလိုတယ်။​—သုတ္တံ ၁:၈။ ၃:၁။ ၁၃:၁၄။ ဟေရှာယ ၂:၃။
တိုရာ ဒါမှမဟုတ် ပင်တကျွတ်ကျမ်းထဲမှာ ဘာတွေပါသလဲ။
ဖန်ဆင်းခြင်းကနေ မောရှေသေဆုံးတဲ့အထိ လူတွေနဲ့ ဘုရားသခင်ဆက်ဆံပုံ သမိုင်းကြောင်း ပါတယ်။​—ကမ္ဘာဦး ၁:​၂၇၊ ၂၈။ တရားဟောရာ ၃၄:၅။
မောရှေပညတ်တရားရဲ့ စီရင်တော်မူချက်တွေ ပါတယ်။ (ထွက်မြောက်ရာ ၂၄:၃) ပညတ်တရားမှာ ပြဋ္ဌာန်းချက်ဥပဒေပေါင်း ၆၀၀ ခန့်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ အထင်ရှားဆုံးက ရှီမာ ဒါမှမဟုတ် ဂျူးတွေရဲ့ ယုံကြည်ခြင်းဝန်ခံချက် ဖြစ်တယ်။ ရှီမာရဲ့ အပိုင်းတစ်ပိုင်းမှာ “သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့၊ အစွမ်းသတ္တိရှိသမျှနှင့်ချစ်လော့” လို့ဆိုတယ်။ (တရားဟောရာ ၆:​၄-၉) ယေရှုက အဲဒါကို “အကြီးမြတ်ဆုံးနှင့် ပထမဆုံးပညတ်ဖြစ်၏” လို့ပြောခဲ့တယ်။​—မဿဲ ၂၂:၃၆-​၃၈။
ယေဟောဝါဆိုတဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့နာမည်​အကြိမ် ၁,၈၀၀ ခန့်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့နာမည်ကို အသုံးမပြုရလို့ပြောမယ့်အစား ဒီနာမည်ကို ဘုရားလူမျိုး ​အသံထွက်ပြောဖို့ တိုရာထဲမှာ မိန့်ဆိုထားတယ်။​—တောလည်ရာ ၆:​၂၂-​၂၇။ တရားဟောရာ ၆:​၁၃။ ၁၀:၈။ ၂၁:၅။
အမှား- တိုရာမှာပါတဲ့ ပညတ်တွေဟာ ဘယ်တော့မှ မပြောင်းလဲတဲ့ ထာဝရပညတ်တွေဖြစ်တယ်။
အမှန်- ဘာသာပြန်ကျမ်း တချို့က တိုရာပါ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ပညတ်တွေဖြစ်တဲ့ ဥပုသ်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်၊ အပြစ်ဖြေရာနေ့နဲ့ဆိုင်တဲ့ ပညတ်တွေဟာ “အစဉ်အဆက်” ဒါမှမဟုတ် “ထာဝရ” ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုတယ်။ (ထွက်မြောက်ရာ ၃၁:၁၆။ ၄၀:၁၅။ ဝတ်ပြုရာ ၁၆:​၃၃၊ ၃၄) ဒါပေမဲ့ ဒီအခန်းငယ်တွေမှာသုံးထားတဲ့ ဟီဘရူးစကားလုံးက အစဉ်အမြဲတည်တာကိုမဟုတ်ဘဲ အတိအကျ မသိနိုင်တဲ့အချိန်အထိ တည်ရှိနေတာကိုလည်း ဆိုလိုနိုင်တယ်။ * မောရှေရဲ့ ပညတ်ပဋိညာဉ်ဟာ အနှစ် ၉၀၀ လောက်အကျိုးသက်ရောက်ပြီးနောက် ဘုရားသခင်က အဲဒါကို “ပဋိညာဉ်သစ်” နဲ့ အစားထိုးမယ်လို့ ကြိုဟောလိုက်တယ်။ (ယေရမိ ၃၁:၃၁-​၃၃) “ပဋိညာဉ်တရားသစ်ဟူ၍ မိန့်တော်မူသည်တွင် ပထမပဋိညာဉ်တရားကို ဟောင်းစေတော်မူ၏။” (ဟေဗြဲ ၈:​၇-​၁၃) ယေရှုခရစ်ရဲ့ သေခြင်းကို အခြေခံပြီး လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၂၀၀၀ လောက်က အစားထိုးခဲ့တယ်။​—ဧဖက် ၂:​၁၅။
အမှား- ဂျူးနှုတ်တိုက် ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေနဲ့ တာလ်မွဒ်ကျမ်းတွေဟာ ရေးသားထားတဲ့ တိုရာကျမ်းနဲ့ တန်းတူအခွင့်အာဏာရှိတယ်။
အမှန်- ဘုရားသခင်က မောရှေကို ရေးမှတ်ထားတဲ့ တိုရာကျမ်းအပြင် နှုတ်တိုက်ပညတ်ကိုလည်း ပေးတယ်လို့ ကျမ်းစာ အထောက်အထားမရှိပါဘူး။ ကျမ်းစာဆိုတာက- “ဤစကားများကို ရေးထားလော့ . . . ဟု မောရှေအား မိန့်တော်မူ၏။” (ထွက်မြောက်ရာ ၃၄:၂၇) နှုတ်တိုက်ပညတ်ကို နောက်ပိုင်းမှ ရေးသားပြီး မစ်ရှ်နာကျမ်းလို့ ခေါ်ကြတယ်။ အဲဒါကို ဖာရိရှဲတွေ စတီထွင်ခဲ့တဲ့ ဂျူးရိုးရာထုံးတမ်းအစဉ်အလာတွေကို စုပေါင်းရေးထားပြီး တာလ်မွတ်ကျမ်းထဲ ထည့်သွင်းလိုက်တယ်။ တကယ်တော့ ဂျူးရိုးရာထုံးတမ်းတွေဟာ မကြာခဏဆိုသလို တိုရာနဲ့ ဆန့်ကျင်တယ်။ ဒါကြောင့် ယေရှုက ‘သင်တို့သည် အဆက်ဆက်ခံသော နည်းဥပဒေသအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော်ကို ပယ်ကြ’ တယ်လို့ ဖာရိရှဲတွေကို ပြောတာဖြစ်တယ်။​—မဿဲ ၁၅:​၁-၉။
အမှား- တိုရာကျမ်းကို အမျိုးသမီးတွေကို မသင်ပေးသင့်ဘူး။
အမှန်- မောရှေပညတ်မှာပါတဲ့ ဥပဒေတစ်ခုက ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ သူငယ်တွေပါ ပါဝင်တဲ့ အစ္စရေးပရိသတ်အားလုံးရှေ့မှာ ပညတ်တရားတစ်ခုလုံးကို ဖတ်ရွတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ “သူတို့ကြား၍ နားလည်သဖြင့်၊ သူတို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့၍ ဤပညတ်တရား စကားအလုံးစုံတို့ကို စောင့်ရှောက်စေ” ဖို့ဖြစ်တယ်။​—တရားဟောရာ ၃၁:၁၀-​၁၂။ *
အမှား- တိုရာကျမ်းထဲမှာ လျှို့ဝှက်တဲ့ တရားတွေပါတယ်။
အမှန်- တိုရာကျမ်းပါစကားတွေက ​နားမလည်နိုင်တဲ့တရားမဟုတ်၊ လျှို့ဝှက်စကားနဲ့ ရေးထားတာမဟုတ်၊ လူတိုင်း ဖတ်နိုင်တယ်လို့ ကျမ်းရေးသူ မောရှေက ပြောတယ်။ (တရားဟောရာ ၃၀:၁၁-​၁၄) တိုရာကျမ်းထဲမှာ လျှို့ဝှက်စကားတွေပါတယ်ဆိုတဲ့ သီအိုရီဟာ ကာဘာလာ လို့ခေါ်တဲ့ လျှို့ဝှက်နက်နဲတဲ့ ဂျူးဘာသာရေးကို အခြေပြုတယ်။ အဲဒီကာဘာလာက “ပရိယာယ်နှင့်ပြင်ဆင်သော” နည်းတွေကိုသုံးပြီး ​ကျမ်းစာကို အနက်ဖွင့်ထားတာ ဖြစ်တယ်။ *​—၂ ပေတရု ၁:​၁၆။
^ အပိုဒ်၊3ပြန်လည်တည်းဖြတ်ထားတဲ့ The Strongest Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible စာအုပ်၊ “ဟီဘရူး-အာရမိတ် အဘိဓာန်- ဓမ္မဟောင်းကျမ်း နောက်ဆက်တွဲ” ရဲ့ အမှတ်စဉ် ၈၄၅၁ မှာကြည့်ပါ။
^ အပိုဒ်၊ 13 Theological Wordbook of the Old Testament, အတွဲ ၂၊ စစ. ၆၇၂-​၆၇၃ ကိုရှု။
^ အပိုဒ်၊ 17 တိုရာသွန်သင်တာနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီး ဂျူးထုံးတမ်းစဉ်လာက အမျိုးသမီးတွေ တိုရာဖတ်ရှုလေ့လာတာကို တားမြစ်တယ်။ ဥပမာ၊ ရဗ္ဗိ အေလီဇာ ဘင် ဟေကေနပ်စ်ရဲ့စကားကို မစ်ရှ်နာကျမ်းက ဒီလိုကိုးကားဖော်ပြတယ်- “ကိုယ့်ရဲ့သမီးကို တိုရာကျမ်း သင်ပေးသူဟာ သူ့ကို မဖွယ်မရာတွေ သွန်သင်ပေးနေတာပဲ။” (ဆိုတာ ၃:၄) ဂျေရုဆလင် တာလ်မွဒ်ကျမ်းထဲမှာ ပါတဲ့ သူ့စကားက “တိုရာကျမ်းကို အမျိုးသမီးတွေ ပေးသိမယ့်အစား မီးရှို့ပစ်တာ ပိုကောင်းတယ်။”​—ဆိုတာ ၃:​၁၉က။
^ အပိုဒ်၊ 19 ဥပမာ၊ တိုရာကျမ်းအပေါ် ကာဘာလာရေးသူတွေရဲ့ သဘောထားကို Encyclopaedia Judaica ကဒီလိုဖော်ပြထားတယ်။ “တိုရာကျမ်းက ဘာကိုမှ အတိအကျဆိုလိုတာမရှိပေမဲ့ အလွှာအမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုး ရှိပုံရတယ်။”​—ဒုတိယအကြိမ်ထုတ်၊ အတွဲ ၁၁၊ စာမျက်နှာ ၆၅၉။
ဘုရားသခင်မှာ အနန္တတန်ခိုးရှင်၊ ဖန်ဆင်းရှင်၊ သခင်စတဲ့ ဘွဲ့နာမည်တွေ ရှိပါတယ်။ ဘုရားရဲ့ကိုယ်ပိုင်နာမည်ကို ကျမ်းစာမှာ အကြိမ်ပေါင်း ၇,၀၀၀ ခန့် ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
ရှေးအစ္စရေးလူမျိုးကို ဘုရားပေးတဲ့ပညတ်က တရားမျှတမှုရှိသလား